Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta Seattle ee COVID-19 - IandRaffairs | seattle.gov
Codsiga Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta Seattle ee COVID-19.
Tirada Reerka Wadarta Dakhliga Qoyska Inta udhaxeysa
Codsiga Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta Seattle ee COVID-19
Dukumiintiyada Deganaanshaha iyo Aqoonsiga [Liiska B]
Dukumiintiyada Aqoonsiga [Liiska C]
Community Response Alliance: (206) 618-5794
Ikhtiyaar Muddo intee le'eg ayay qaadan doontaa in la helo lacagta? Sideen ku heli doonaa lacag-bixinta?
Hubi* 7-14 maalmood ka dib xilliga codsigu xirmo ayaa go'aannada abaalmarinta la gaarayo. Laguugu soo diri donaa boostada cinwaanka aad dhiibtay.
7-14 maalmood ka dib xilliga codsigu xirmo ayaa go'aannada abaalmarinta la gaarayo. Laguugu soo diri donaa boostada cinwaanka aad dhiibtay.
Karka hadiyad Mastercard ka oo Dijital ah 1-2 maalmood ka dib xilliga codsigu xirmo ayaa go'aannada abaalmarinta la gaarayo. Un Iimayl laguugu soo hagaajiya cinwaanka emaylka aad dhiibtay.
Toos Akountiga laguugu soo shabayo 2-5 maalmood ka dib xilliga codsigu xirmo ayaa go'aannada abaalmarinta la gaarayo. Toos ugu shubista Koontada Bangiga.